Qophii Addaa marii haala yeroo irratti MSG-GS ABO Adde Saamiyaa Osmaan waliin taasifame |
ONN LIVE | Bitootessa 14 2019 | Qophii Addaa marii haala yeroo irratti MSG-GS ABO Adde Saamiyaa Osmaan waliin taasifame
Waamicha hooggantoota ABO
ABOn dhaaba guddaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa qabuudha. Shira diinatii fi qabsoon Oromoo laaffachuu fi dheerachuu irraa kan ka’e hooggansi ABO addaan qoqqoodameera. Kan addaan qoqqoodame ABO osoo hin taane hooggansa ABOti. ABOn dhaaba ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoo bifa qindoome fi ijaarameen Oromoon tokkummaan jalatti hiriiree falmachaa tureedha. Qeerron Oromoo ABOn nuhi jechuun diina dura harka duwwaa dhaabbachuun injifannoo amma dhufe argamsiisan. Uummanni Oromoo ABO lamaa sadi osoo hin taane tokko qofa beeka.
Hooggantoonni ABO waldhabdee fi garaa garummaa kaleessa keessa turtan guutumaan guututti waldhabdee keessan dhiistanii qabsoo saba Oromoo qeerron Oromoo wareega qaalii itti kaffaluun asiin geesse kan naafxanyonni dhaaludhaaf of ijaartee socho’aa jirtu galmaan gahuuf haal duree tokkoon maletti walitti dhuftanii walitti deebi’uun ABO tokkicha uummanni Oromoo jaallatuu fi deeggaru deebisuun abbaa injifannoo qeerroo Oromoo of cinaa hiriirsitanii mooraa qabsoo tokko jalatti deebitanii saba Oromoo ijaartanii qabsoo wareega guddaan asiin geenye dhaabota Oromoo kan akka KFO hundumaa wajjiin walitti tokkoomun galmaan akka geenyu qeerron Oromoo waamicha isiniif goona.
Qaamni kamuu kan aangoo barbaachaf ABOn akka tokko hin taane fi araara diduuf sababa baay’isu diina guddaa uummata Oromooti. Yeroo diinni Oromoo balleessuu barbaaddu wal ijaaraa jirtutti hooggansas tahee namni dhuunfaa tokkummaa dhaabota Oromoo danquudhaf rakkoo kanaan dura mooraa QBO keessa ture akka sababa addaan qoqqooduu godhatee ABO fi dhaabota biroo ittiin qoqqoodun itti fufuu barbaadu uummata Oromoo kan gabrummaa jalatti kuffisuu barbaadudha.
ABOn tokko tahuun dhaaba KFOtin walitti makamuun dhaaba cimaa Oromoo tokko uumun fedhii osoon taane dirqama yeroon gaafatuudha.
Hooggantoonni ABO haal duree tokkoon maletti hatattamaan walitti tokkoomtanii KFO fi dhaabota Oromoo QBO galmaan gahuuf qabsaa’aa turan waliin tokko tahuun saba Oromoo ijaartanii qabsoo Oromoo kan wareega guddaan asiin geenyee diinni dhaalaa jirtu akka baraartan waamicha isiniif dabarsina.
Oromoon paartii morkataa tokko qofa barbaada.
ABOT kophaatti ABO bakka hin bu’u.
ABOSG kophaatti ABO bakka hin bu’u.
ABOQC kophaatti ABO bakka hin bu’u.
ABOn uummanni Oromoo beeku tokko.
ABO+KFO= BIRMADUMMAA OROMOO
DHAABNI TOKKUMMAA HIN BARBAANNE DIINA OROMOOTI.
Baayinni WBO araara jedhame fudhatanii mooraa seenaan akka armaan gadii kanadha.
Begii = 275
mandii = 30
Najjoo = 33
Gulisoo = 119
Gidaamii = 93
Dambii doolloo = 53
Qaaqee = 23
Wallagga bahaa =183
Idaa’ama walii gala isaanii 809 yeroo ta’an koreen tekinikaa miidiyaadhaan 1500 jedhamee akka gabaafamuuf jirudha. Maaliif sobanii itti dabaluun akka barbaachise hin beeknu.
Dhuguma akka Jaal Marroon BBC Afaan Oromoo irratti jedhe persentii 5 hin ta’aan warri gale.
Previous articleOh, Finfinnee! May Reason and Justice Prevail!
Next articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 15, 2019